Entertainment » Tokarev ( Rage )	60
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Dec 23, 2014 in Entertainment, Movies/TV | 60 comments
– (မှတ်ချက်။ ။ မောင်ဘလှိုင် မမြင်စေရ) – မင်းသားက နီကိုးလတ်စ်ကေ့ခ်ျ ( ကျွန်တော် နှစ်သက်သော မင်းသားများထဲမှ တယောက်) … နာမည်က ပေါလ်တဲ့… လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပေါ့…
တောင်ပေါ်သား says: မရဘူး အခွေပါဝယ်ပေးပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်… ဦးမျိုး… တွေ့ဆုံပွဲကျရင် ကြည့်ချင်သူတွေပြော.. အနော် အခွေကူးလာပေးမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းနဲ့တင် အတော်စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေပြီ..ကိုထွဍ်ရေ……။
Yae Myae Tha Ninn says: အခွေတွေက အခုတလော စီမံချက်ရှိတယ် ထင်တယ်… ကြည့်မြင်တိုင်မှာလဲ ၀ယ်မရဘူး… ကောင်းကင်ပြာရေ…ဆိုင်ရှင်နဲ့သိတော့ ကပ်တိုးလေး ၀ယ်ရတယ်… ဟီး…ပန်းဆိုးတန်းမှာတော့ အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းနေကြတာ တွေ့တယ်… အရင် BAK နားမှာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: သူ့ကားတွေက ကောင်းပါတယ် တော်တ်ာများများ
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်တယ်… အောင်မိုးသူ… အကိုလဲ ကြိုက်တယ်… သူဆေးစွဲနေတဲ့ ရဲ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ကား ရှိသေးတယ်.. တော်တော်ကောင်းတယ်… ကားနာမည်တော့ မှတ်မိတော့ဘူး… ဟီး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1608
ကြောင်ဝတုတ် says: အဲ့ရုပ်ရှင်နာမည်က Bad Lieutenant
Yae Myae Tha Ninn says: ကျွမ်းလိုက်ချည်လား… ဖက်ဖက်… ကျေးဇူးဗျာ… အခွေတော့ ရှိတယ်.. သူချည်းပဲ စုထားတာ ၁၆ ကားထင်တယ်… Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ဖားသက်ပြင်း says: အီဗာမန်​ဒပ်​မှတ်​ထားတာပါဗျာ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဇာတ်လမ်းအပြည့် ဒေါင်းလို့ရမယ့် လင့်ခ်လေး..ပေးနိုင်လား ငင်..
Yae Myae Tha Ninn says: အခွေဌားမယ်လေ… ဆက်ဆက်.. ဒေါင်းရင်ကြာသေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1608
ကြောင်ဝတုတ် says: အဲဒီကားရဲ့ လှည့်ကွက်လေးက နောက်ဆုံးလေးမှပါ….
ခင်ဇော် says: နာ့ အရင် သိမ်းထားပေးရမား??
ကြောင်ဝတုတ် says: သိဝူးလား… ကျုပ်က ရုပ်ရှင်သရဲလေ….
Yae Myae Tha Ninn says: ကော်မန့်က ရှည်ရင် ဘာလို့မသိ… ပလုံပလုံ လုပ်တင်းသွားတယ်… အခွေလိုချင်ရင် ပြောလေ… ဖက်ဖက်.. အရင်က ခိုးကူးဘာသာပြန်ပေးဖူးတော့ အော်ရီချင်တယ်တွေ ရှိတယ်.. ဘာသာတော့ ပြန်ရသေးဘူး.. သို့သော် အကြည်… Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဆရာမကြီးရော ကြည့်ပြီးပလား.. ဇီဇီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: မကြည့်ရသေးဝူးး
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်တယ်… ဖက်ဖက်ရေ… ဒါကြောင့် ဇာတ်သိမ်းကို လျှိုထားတာ… ပျိုးခဲ့သမျှ အထွဋ်အထိပ်က ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာကိုး… ကိုယ်သာဆို ပစ်သတ်မိမှာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ဖားသက်ပြင်း says: အိုဇာဝါ မာရီယာက ၁၀၀
Yae Myae Tha Ninn says: ဆောရီးနော်.. ဂီ… အနော် နားမလည်လို့ ရှင်းပြပေးပါလား…
ဟုမ်းမိတ်​ က ၄၈၈ ဆိုတာကို… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: အော်… အဲသလို…. :D
kyeemite says: .ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မင်းသားပါပဲ..ကြည့်ဖူးတယ်
Yae Myae Tha Ninn says: ၂၀၁၄ ကတည်းက ထွက်တာဆိုတော့ ကြည့်ဖူးလောက်ကြမှာပါ… အခုကတော့ လုံးဝ အကြည်ဗျ… ဦးမိုက်ကြည့်တာ အနောက်ဆို အခွေဌားမယ်လေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1982
CharTooLan says: အိုက်မင်းသားအိုယီး မကျိုက်ဝူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: မဆိုးပါဘူး.. ချာတူးရယ်… သဘာဝ မင်းသားလို့တောင် ပြောရမလားပဲ… သဘောကျတယ်… Face Off တုန်းက လူဆိုးဆိုပေမယ့် သဘောကျခဲ့တာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1608
ကြောင်ဝတုတ် says: ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ City of Angels ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်….
black chaw says: အတော် စောစောပိုင်း 1991 က ရိုက်ခဲ့တဲ့
Yae Myae Tha Ninn says: အဲဒီ အပုတ်ကောင်တွေ တဆိတ်လောက်ဗျာ.. လေးဘလက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်… အွန်လိုင်းက အမြည်းကြည့်လိုက်မယ်… ဖက်ဖက်… ကျေးကျေး… အနော်လဲ အရင်က အခွေတွေ အများကြီးပဲ… အော်တွေချည်းပဲနော်.. အင်္ဂလိပ်ကားတွေ ဖမ်းတယ်ဆိုတာ နဲ့ ကြောက်ပြီး အိမ်ကြည့်လောက်ပဲ ထားလိုက်တာ… သူငယ်ချင်းတယောက်က ကူးစက်နဲ့ အစိခံလိုက်ရတာကိုး.. လန့်တာပေါ့… :D
Yae Myae Tha Ninn says: ဂျော်နီဒတ်လဲ အနော်ကြိုက်ပါတယ်… သူ့ကားတွေ အကြောင်းတင်ပါဦးမယ်… ဇီဇီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: အိမ်မှာက.. ကေဘယ်ယူထားတာ.. ကေဘယ်တီဗီတွေကဲလာလိုက်တာ… ရုံမှာတင်နေတဲ့ကားကိုပါ.. အိမ်ကနေ.. ဒေါ်လှ၈ဒေါ်လာနဲ့ကြည့်လို့ရနေပြီဗျ..။
ရှယ်ရာပါမယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ၈ ဒေါ်လာဆို ၈၀၀၀ကျော်တောင် ဘုရားဘုရား.. အဲလောက်တော့ မကြည့်နိုင်တော့ဘူး.. ရုံမှာဆိုတမျိုးပေါ့… ပြီးတော့ အပိုင်ရတာလဲ မဟုတ်… အခွေလုပ်တုန်းက အော်တခွေ ၁ သောင်းခွဲပေးဝယ်ပေမယ့် ပိုက်ပိုက်ပြန်ရသေးတယ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1608
ကြောင်ဝတုတ် says: လုပ်ချင်တာပေါ့ သူကြီးရာ….
Yae Myae Tha Ninn says: အနော်ကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်လိုမျိုး တခု ပိုက်ဆံပေးရပါစေ… အင်ဖော်မေးရှင်းရှယ်… ဆက်သွယ်လို့ကောင်း တဲ့ ကွန်ယက်တခု လုပ်ချင်တယ်… အခုဆို လူမသန့်တော့ဘူး.. ကလေးအစခွေးအဆုံး သုံးပြီး ဆဲချင်သလိုဝင်ဆဲတဲ့ သူတွေကို ကန့်သတ်ချင်တာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: လုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်..။ အခုလုပ်ကြည့်နေပါတယ်..။
အစားအသောက်လည်း.. ဒီလိုပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ဖားသက်ပြင်း says: ဒို့သဂျီး အသက်​ရလာ​တော့
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်… လုပ်ကြည့်ပါ တဂျီးရယ်… စိတ်ညစ်လွန်းလို့… အဲလောက်တောင် ဈေးကြီးလား တဂျီး.. အင်းပေါ့ သူ့ဈေးနဲ့ သူပေါ့လေ… တဂျီးကတော်နဲ့ တိုင်ပြောမယ်… အပြင်စာမက်လာတယ်ဆိုပြီး… :P
uncle gyi says: သူကြီး
Yae Myae Tha Ninn says: မပြောပါနဲ့တော့… အန်ကယ်ကြီးရယ်…. :P
လာအားပေးတာ ကျေးကျေးနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ဖားသက်ပြင်း says: အနှစ်​သက်​ဆုံးမင်းသားတ​ယောက်​ပါပဲ
Yae Myae Tha Ninn says: ကျွန်တော်လဲ ငယ်ငယ်က အိမ်က အောက်စက် မ၀ယ်နိုင်တော့ သူများအိမ်မှာ လိုက်ကြည့်ရတယ်… ကိုယ်ကြိုက်ပေမဲ့ သူတို့ မကြိုက်ရင် မကြည့်ရဘူးလေ… အဲလိုနဲ့ ရုပ်ရှင်ငတ်ခဲ့ဖူးတယ်…ပိုက်ဆံ နည်းနည်း ရှိလာတော့ အောက်စက်ဝယ်ပြီး ပြန်ကြည့်တာ… တနေ့ ၃ ၄ကား တခါတခါ ညလုံးပေါက်ကို ကြည့်တာဗျ… မင်းသားကတော့ အကြိုက်ချင်းတူပါတယ်ဗျာ.. ကိုဖားသက်ပြင်းရေ(ကိုဂျော်နီဒတ်ရေ)…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Nicolas Cage လား။
Yae Myae Tha Ninn says: အရီးက တွမ်ဟန့် ကြိုက်တာလား… အိုကေ နောက်များ ထပ်တင်ရင် သူ့ကားတင်ပေးမယ်… City Of Angel ကိုတော့ ရှာကြည့်မယ်ဗျာ… ဖက်ဖက်ရော အရီးရော ညွှန်းပေးတာ ကျေးဇူး… အရီး လူလည်ကျတယ်… ၀ီကီထဲက ဘာသာပြန်ပြီး အနော့်ကို လာပြောတယ်… နောက်တကားတင်ဖို့ ရှိတယ်.. နီကိုးလတ်စ်ပဲ အဲဒါက (Matchstick Man) အနော် နာမည်ပေးထားတာက ဂျင်ပေါ်ကထုံးတဲ့.. မကြာမှီလာမည်ပေါ့… :D
ကြောင်ဝတုတ် says: ကဲ… ကေ့ခ်ျကြီးအကြောင်းဆက်ပြောရရင်….
Yae Myae Tha Ninn says: The Weather Man လဲ ကြည့်ဖူးတယ်… ရေးတေးတေးတော့ ဖြစ်နေပြီ… ရှာပြီဗျာ.. ပိုလဲကြည့်ချင်သွားပြီ… City Of Angle ကို… Matchstick Men လဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ဦး… ကောင်းတယ်… အညွှန်းက နောက်နည်းနည်းကြာရင် တင်မယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အရီးပြောတာကြောင့် City of Angels ကို မှတ်မိသွားပြီ….
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်လား… ကောင်းကင်ပြာ အခွေရှိလားဟင်… လိုက်ရှာရင် ကြာမှာ.. ရှိရင် ဌားပါဗျာ… အဲတုန်းကဆို မင်းသားက ငယ်ဦး မပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အယ် ငှားချင်ပါတယ် ကိုထွဋ်ရေ…..။
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်… ရှဲ့ရှဲ့… ကောင်းကင်ပြာ… ရှာပေးနော်… ကြည့်ချင်လို့ပါ… မိန်းမကိုလဲ ပြမို့… Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: City of Angels ကို အတော်ကြိုက်တယ်ဗျ …
Yae Myae Tha Ninn says: ဟာ.. အနော်တော့ အန်တီမွသဲ နဲ့ ကြက်ပေါင်သီးလို ဖြစ်နေပြီ… အားလုံး ကြည့်ဖူးပြီး အနော် မကြည့်ဖူးဘူး ဖြစ်နေတယ်… ဦးကျောက်လင့်လေး ရှိရင် ရှယ်ပါလား.. ဒေါင်းဖို့… ဟဲ… အန်တီမွ ဆောရီးနော်.. ဟီး… ဥပမာ ရုတ်တရက် ခေါင်းထဲရှိတာ ပေးလိုက်တာမို့… သဘောကတော့ အန်တီမွကို ခေါင်းထဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော့…. တခုခုဆို ပြေးသတိရလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့ နော့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: http://extratorrent.cc/category/
ဦးကျောက်ခဲ says: ….extratorrent.cc/category/….
Yae Myae Tha Ninn says: ပိုက်ပိုက်တောင်းသလားလို့.. ဦးကျောက်ရယ်… Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: Nicolas Cage ကို Face Off မှာကတည်းက…ကြိုက်ခဲ့တာ… နောက်ပိုင်း သူ့ကားတွေ အတော်များများ ကြည့်ဖြစ်တယ်….။ သို့သော်… Ghost Rider နဲ့ Season of the witch မှာ မကြိုက်…။ သူသရုပ်ဆောင်တာ ကောင်းပါလိမ့်မယ်…။ အင်ပေါဇေးဘဲကားတွေ သိပ်မကြိုက်တတ်လို့ အိုက်ဒိ ၂ ကားပြီး နောက်ပိုင်းကတည်းက သူနဲ့ ခွာပြဲခဲ့တာ….။
Yae Myae Tha Ninn says: ပိုင်လိုက်ချည်လား.. ဒေါ်ကောင်းကင်… နီကိုးလတ်စ်နဲ့တောင် ခွဲပြဲသွားတယ်ဆိုပဲ… အဟိ… :P
ခုတော့လဲ ပြန်ပေါင်းထုပ်တယ်တဲ့.. ဒါဆို ဟိုဂျွန်စောလေးက ဘယ်သွားထားမလဲ… :D
La Yeik says: တွမ်ဟင့်ကို ပိုကြိုက်ဒယ် နီကိုလပ်ကေ့ခ်ျထက်….ဒါပေမဲ့ ဒီကားလေးလည်း ကြိုက်ပါဒယ်
Yae Myae Tha Ninn says: ကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့… ဒေါ်မိုးနတ်မယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 517
မောင်ဘလိူင် says: သူ့ဇာတ်​ကားသစ်​ dying of the light နဲ့ outcast မ​နေ့ကပဲကြည့်​မိ​သေး။
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်လား… ရှာဝယ်လိုက်ဦးမယ်… ကိုဘလှိုင်ရေ… ဇာတ်လမ်းရေးထားတာ ဘယ့်နှယ်နေလဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.